Solutions Full si ay u gudbiyaan Xogta laga Phone kasta oo A New iPhone 7 / iPhone 7s
Waqti kastoo hadda Apple soo bandhigi doonaa taariikhda daayo rasmiga ah ee 6s iPhone cusub (Plus). Kasta oo taageere Apple oo iPhone ku faraxsan yahay sida ka baxsan dunidan doonaa. Dadka ku bilaaban doono lacag iyo helidda ururinta Cidduu laga yaabaa inay bixiyaan ama iibiso ugu dhakhsaha-ka-ahaan jirka iPhone. Files ay - Laakiin, dadka isticmaala badan oo ku saabsan mid ka mid ah wax illoobin. Waxay yeelan doonaan si ay u gudbiyaan files ay ka jir iPhone bartey.
Okay, si, waxaad qaadan kartaa oo dhan ee files si aad u iCloud. Ama, waxaad iyaga gadaal laga yaabo on Lugood aad. Laakiin, habka tani waxay noqon kartaa sida jiita ah. Waxa aad qaadataa waqti dheer si ay u abuuraan nusqado. Iyo, ka dib markii aad la abuuro gurmad ah waxay u badan tahay in aad qabto hayaan badan horay. Sidaas, sidee ayaad u doortaan mid sax ah? Iyo, waxa ugu xun ee dhici kara waa in aad overwrite, tusaale ahaan, Lugood aad hayaan marka aad 6s iPhone cusub (Plus) xidhmaan kombiyuutarka. Taasi waxa ay noqon lahaayeen qashinka ah, ma uu doonaynin waxay?
Sidoo kale, dadka isticmaala badan oo dhab ahaantii jeclaan lahaa in ay awoodaan in ay xogta teleefon kasta wareejiyo ay 6s iPhone cusub (Plus). Nasiib darro, iPhone cusub ma yeelan doonaan Bluetooth, si kala iibsiga tooska ah waa wax aan macquul aheyn. Laakiin, dadka isticmaala telefoonka ugu wareejin karaan xogta si ay computer ka dibna ka computer wareejiyo xogta si iCloud ama Lugood. Laakiin, habkan horay u muuqataa wax adag, iyo dadka isticmaala badan oo xitaa ma dhibaato in ay tijaabiyaan.
Xogta Transfer teleefon kasta si iPhone 6s (Plus)
Laakiin, waxa hadii aan kuu sheegay in barnaamijka gaar ah ay ka jirto, taas oo awood u kala iibsiga si toos ah uga soo kasta phone u iPhone cusub 6s (Plus). Haa, telefoonka ma aha xataa weli, laakiin barnaamijkan u awood badan inay haatan taageertaa version cusub ee macruufka (kaas oo haatan ku sugan beta). Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa Wondershare MobileTrans.
Wondershare MobileTrans Waa barnaamij kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah u gudbiyaan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka taariikhda, photos, music, videos iyo barnaamijyadooda ka Android, Blackberry ama Nokia (Symbian) taleefanka si aad iPhone. Waa maxay mar ahaan jireen geedi socod dheer hadda waxaa la samayn karaa in mid ka mid click. Laakiin, Wondershare MobileTrans ayaa sheegay in wado ka badan oo kaliya xogta laga wareejiyo fursadaha mid phone in kale . Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
Dib telefoonka ah si aad u computer ka dibna soo celin gurmad ay u qalab kale oo wax kasta oo ay taageerayaan.
Wondershare MobileTrans Kaa caawin kara inaad xajisaan kulli xogta aad xaqiijistay.
Ceshano hayaan jira qalabka ay taageerayaan.
Wareejinta xogta ka Lugood in qalabka kale ee taageeray.
Ceshano xogta laga gurmad iCloud in Android .
Oo qaar badan, dad badan oo dheeraad ah.
Wondershare MobileTrans Taageeraa in ka badan 3,000 oo telefoonada iyo shabakadaha kala duwan. Sidoo kale, barnaamijkan ku siinayaa awood u leeyahay inuu si joogto ah iyo si ammaan ah u tirtirto xogta ka telefoonka, aan awoodin in ay abid soo kabsadaan mar labaad. Habkaani wuxuu noqon karaa mid aad u faa'iido badan marka aad iibiso aad telefoon, ama siinaya qof.
Ka dhig wax akhriska si ay u arkaan sida loo isticmaalo Wondershare MobileTrans si ay u gudbiyaan xogta si iPhone 6s (Plus) ama qalab kale oo wax kasta oo ay taageerayaan.
Xogta Transfer ka Nokia / iPhone / phone Android jir ah u 6s iPhone cusub (Plus)
Hadda, aynu ku tuso sida sahlan waa in ay xogta ka mid phone wareejiyo kale isticmaalaya Wondershare MobileTrans.
First of dhan, waxaad u baahan tahay in ay sii wadaan Wondershare MobileTrans. Ka dib marka aad sidaas samayso, riix Start in ay galaan taleefanka si uu suuqa kala iibsiga telefoonka. Markaas, aad u hubiso in isku xiro labo qalabka. Qalabka aad rabto in aad xogta ka soo wareejiyo iyo qalabka aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xogta ay u. Qalabkaas waxay noqon kartaa Android, macruufka ama Symbian. Si aad u xirmaan ay hindiseen, isticmaali fiilooyinka USB aad heshay iyaga la. Marka qalabka ay ku xidhan yihiin MobileTrans iyaga lagu ogaan doonaa. Markaas, waxaad arki doontaa suuqa kala socda.
Haddii aad fiiro gaar ah, waxaad arki doontaa in xogta laga phone isha ku qoran yahay dhexe ee shaashadda. Waxaad dooran kartaa wixii xog kuu soo gudbin doonaa. Waxaad dooran kartaa dhammaan xogta ama waxaa laga yaabaa sawiro oo kaliya. Ka dib marka aad la sameeyo la-socodka doorashada, guji "Start Copy 'badhanka. Dhammaan xogta la doortay ayaa la koobiyeyn doonaa in phone Ahaado.
Fadlan, maskaxda ku hay in Kalandarada aan loo gudbin karaa oo ka telefoonada Nokia.
Voila! Waa sidaas. Xogta beddelashada ka mid qalab mid kale ayaa ah nin aan ka hawl yar ka hor.
Xogta Transfer ka Kies / Lugood / iCloud / gurmad Blackberry cusub iPhone 6s (Plus)
Hadda oo aan idin tusay sida sahlan waa in ay xogta ka mid phone wareejiyo kale, aynu ka mid ah wax ka badan idin tusin. Markan, waxa aanu diirada saari doontaa gurmad in qalab gaar ah kala iibsiga. Waxaa jira laba siyaabood oo sidaas loo gaaro. Habka ugu horeysay ka mid ah xogta ka iCloud wareejinta qalab kale. Habka labaad ku tusi doona sida ay u gudbiyaan xogta ay ka your computer, Lugood ama xataa gurmad Kies in qalab aad.
1. ka iCloud beddelashada Data in Device kale
First of dhan Wondershare MobileTrans furan iyo raadiyo icon iCloud ah. Si nidaamka bilowdo, waxaad u baahan tahay in guji ku yaal si aad u soo geli karaa 'Soo Celinta ka iCloud' gurmad hab. Barnaamijku wuxuu ku weydiin doonaa inaad galaan xogta account iCloud. Ha welwelin, Wondershare marnaba badbaadin doonaa ID Apple ama password aad.
Si loo soo celiyo gurmad iCloud aad u baahan doontaa inaad u soo dejisan.
Ka dib markii download la dhammeeyo, xirmaan qalab bartilmaameed aad. Dooro faylasha aad rabto in lagu wareejiyo guji 'Start Copy' badhanka.
Taasi waa. Geedi socodka oo idil waxaa lagu sharxay in labo ka mid ah ku xukuntay.
2. Computer / Kies beddelashada Data / gurmad Blackberry
Tutorial Tani waxay la soo dhaafay ayaa sidoo kale waa sida ugu fudud ee mid, laba, saddex!
First of dhan, si aan u soo celin gurmad ah awood, waxaad u baahan doontaa inaad dib u wax kor ugu horeysay. Orod MobileTrans halka qalab aad rabto in aad dib waxaa ku xiran in kombiyuutarka via cable USB ah. Dooro "kaabta Your Phone" ikhtiyaarka in menu guriga. Dooro xog ah in aad rabto in aad gurmad, iyo MobileTrans ka dib doonaa xogta aad dooratay. Ama waxaad toos soo celin karaa gurmad ka Kies ama gurmad Blackberry in aad telefoon.
Si aad u soo celin xogta xoojiyaa doortaan 'Soo Celinta From hayaan' doorasho ka Menu Home halka aad telefoon ku xiran kombiyuutarka. Markaas, dooro file qaab gurmad ah. Ka dib markii aad heshid la doonayo file gurmad in aad dooneyso in aad soo celiso oo aad 6s iPhone cusub (Plus), guji "Start Copy 'si ay u gudbiyaan waxyaabaha ay ka file gurmad ay u phone bartilmaameedka.
Iyo in ay tahay!
> Resource > iPhone > Solutions Full si ay u gudbiyaan Xogta laga Phone kasta oo A New iPhone 6s (Plus)